Olee otú Idozi
Nsogbu na-nsogbu na-egwu egwu vidiyo na VLC Player? -Echeghị na ọ na-ezighị ezi dị ka VLC Player bụ ihe kasị mma ọkpụkpọ maka niile ụdị nke nkiri extensions na kasị ji ọnụ ọgụgụ kasị elu nke ndị mmadụ n'ụwa nile.
Nkebi nke 1: Gịnị mere VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ na-egosi a nwa ihuenyo mgbe m videos bụ ezi?
Part 2: Olee idozi "VLC flv dịghị video"?
Part 3: Wondershare Video Converter Ultimate; The Ultimate Ngwọta
Ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu, metụtara nwa ihuenyo ọbụna mgbe videos bụ ezi, nsogbu ndị metụtara codecs. Ọbụna na-ezighị ezi machie ọnọdụ nwekwara-enye gị a nwa video ihuenyo, ọbụna na audio arụ ọrụ nke ọma. The ọzọ mere nwere ike ịbụ accelerated Video mmepụta. Na-ezighị ezi ịrụ ọrụ nke VLC ma ọ bụ ihe mgbe ochie version nke software bụ nnọọ ndị ọzọ ihe mere nwa ihuenyo na-egosi ma N'ihi ya, ọ pụrụ ịdị mkpa iji kwalite ya.
Ọ bụrụ na, VLC FLV dịghị video egosi, unu niile nwere ike ime bụ na ntughari nke faịlụ ka ụfọdụ ndị ọzọ ndị ọzọ ọkacha mma .avi ndọtị maka kasị mma ahụmahụ na VLC Player. I nwekwara ike imelite VLC Player ma ọ bụ ọbụna i nwere ike na-agbalị un-echichi nke otu ihe ahụ ma reinstallation nke VLC Player. Mgbe ụfọdụ, ndị obere na pụrụ iche aghụghọ na-arụ ọrụ dị mkpa.
Nwere bụ onye ọzọ ngwọta kwa maka otu. Gaa Ngwaọrụ na VLC Player ma họrọ Mmasị. Mgbe ahọrọ Video na Wepu enyocha maka "Accelerated video mmepụta (machie)". Ugbu a na-agbalị nnọọ na-egwu nkiri ahụ ọzọ, i nwere ike na-video na-agba ọsọ n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Lee snapshot maka n'elu kwuru banyere ngwọta.
Ọ bụrụ na VLC apụghị egwu ụfọdụ FLV faịlụ, mgbe ahụ anyị na-atụ aro na ị na ojiji nke Wondershare Video Converter Ultimate ka ndị kasị mma VLC nnyemaaka.
Nkebi nke 3: Wondershare Video Converter Ultimate: The Ultimate Ngwọta
Na teknuzu nkọwa chọrọ bụ kacha nta, na Wondershare Video Converter Ultimate na-aghọ ihe kasị mma nhọrọ maka ndị nwere nke a ụdị nsogbu. The nkọwa dị ka akwado OS: Windows NT4 / 2000/2003 / XP / Vista / 7, na Windows 8 (32 bit & 64 ibe n'ibe), Processor nke 750MHz Intel ma ọ bụ AMD CPU, Free diski ike Space nke 100 MB ma ọ bụ karịa na ebule 256 MB ma ọ bụ n'elu, ihe ndị a chọrọ bụ oke ala na bụ apụtakarị maka ndị na-achọ iji nweta a kwesịrị ekwesị ngwọta maka .flv faịlụ.
Na The Video akwado site Wondershare Video Converter Ultimate dị ka AVI, Mp4, mpg, MPEG, nut, H.264, H.265 (Hevc), Nsv, Vob, MOV, Flv, MKV, MTS / M2ts / TS / TP / Trp (Avchd, H.264, Vc-1, MPEG -2 HD), Mod, Tod, DV, WMV, Asf, 3gp, 3g2, DRM Mp4, RM, Rmvb, Wtv, Ogv, Mxf, Vro, Tivo, wdg, nhọrọ dum na-emeghe maka ndị gafee n'ụwa inweta ọrụ nke a magburu onwe ngwa.
Na ọtụtụ ndị ọzọ nhọrọ dị ka ọrụ, na Wondershare Video Converter Ultimate-enye ọrụ na nhọrọ dị ka Ultra HD Nkwado, gụgharia Media ka TV ezi mfe ma na-enye na ọrụ na njehie free DVD Ahụmahụ. Na Wondershare Video Converter Ultimate, gị Video ahụmahụ bụ n'aka na iru a ọhụrụ larịị!
> Resource> VLC> otú ndozi ".flv faịlụ bụghị egosipụta video" na-eji VLC Media Player?